Yoo Jae Suk, Lee Hyori နဲ့ Rain တို့ရဲ့ SSAK3 ဘယ်လိုအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မှာလဲ? | News Bar Myanmar
Yoo Jae Suk, Lee Hyori နဲ့ Rain တို့ရဲ့ SSAK3 ဘယ်လိုအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မှာလဲ?
Yoo Jae Suk, Lee Hyori နဲ့ Rain တို့အကျော်အမော်သုံးယောက်ပေါင်းပြီး SSAK3 ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုလုပ်ထားကြတာ သိပြီးသားဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ SSAK3 အဖွဲ့ ဘယ်လိုအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
SSAK3 ရဲ့ အဖွဲ့ပွဲဦးထွက်လှုပ်ရှားမှုများထဲမှ အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းအတွက် သီချင်းထုတ်သွားမယ့်အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ Solo သီချင်းတွေရဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ကြေညာသွားပါမယ်တဲ့နော်။
SSAK3 ရဲ့ ပွဲဦးထွက်သီချင်း “Here at the Seaside Again” ကတော့ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ Online မှတဆင့်နားဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ “Here at the Seaside Again” ရဲ့ Music video အပြည့်ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာပါ။
အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံး Debut performance ကိုတော့ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့မှာ MBC ရဲ့ “Music core” အစီအစဉ်မှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ထိုနေ့မှာပဲ “Play That Summer” ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်လည်း ထွက်ရှိလာအုံးမှာပါ။ အားလုံးပဲ တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ SSAK3 အဖွဲ့ကို အားပေးကြမယ်မလား?
(Zawgyi) Yoo Jae Suk, Lee Hyori နဲ႔ Rain တို႔ရဲ့ SSAK3 ဘယ္လိုအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္မွာလဲ?
Yoo Jae Suk, Lee Hyori နဲ႔ Rain တို႔အေက်ာ္အေမာ္သုံးေယာက္ေပါင္းၿပီး SSAK3 ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ အဖြဲ႕တစ္ခုလုပ္ထားၾကတာ သိၿပီးသားျဖစ္ၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ SSAK3 အဖြဲ႕ ဘယ္လိုအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္သြားမယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
SSAK3 ရဲ့ အဖြဲ႕ပြဲဦးထြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ သီခ်င္းထုတ္သြားမယ့္အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ Solo သီခ်င္းေတြရဲ့ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ေၾကညာသြားပါမယ္တဲ့ေနာ္။
SSAK3 ရဲ့ ပြဲဦးထြက္သီခ်င္း “Here at the Seaside Again” ကေတာ့ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ Online မွတဆင့္နားဆင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ “Here at the Seaside Again” ရဲ့ Music video အျပည့္ကို ၾကည့္ရႈခံစားနိုင္မွာပါ။
အဖြဲ႕ရဲ့ပထမဆုံး Debut performance ကိုေတာ့ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ MBC ရဲ့ “Music core” အစီအစဥ္မွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ထိုေန႔မွာပဲ “Play That Summer” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းသစ္လည္း ထြက္ရွိလာအုံးမွာပါ။ အားလုံးပဲ တကယ့္ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲေတြ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ SSAK3 အဖြဲ႕ကို အားေပးၾကမယ္မလား?
Next ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မိန်းမလှကျွန်း (သို့) Daegu နွယ်ဖွားအလှလေးများ »
Previous « ပွဲဦးထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ Perfect All-Kill ရရှိခဲ့တဲ့ Yoo Jae Suk, Rain နဲ့ Lee Hyori တို့ရဲ့ SSAK3